HIM | Health in Myanmar » 2013 » May
"Fringes of society"
It looks like Suu Kyi understands that the rights of people already infected with HIV need to be protected. All right, as far as it goes. But she didn’t mention people who may become infected such as people who inject drugs, men who have sex with men, or female sex workers. Was “people who live […]
AIDS ဖြစ်ပွားမှု သုည အဆင့်ထိ ရောက်ရှိရေး သုတေသန မော်လမြိုင်ကို ရွေးချယ်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, Popular, အခွင့်အရေး
AIDS ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု လျော့နည်း ပပျောက် သုည အဆင့်ထိ ရောက်ရှိရေး သုတေသနပြုလုပ် ခြင်းကို အာဆီယံ နိုင်ငံများရှိ မြို့များတွင် ပြုလုပ်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သော အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် အရ အာဆီယံ ၈ နိုင်ငံတွင်းရှိ မြို့ ၁၃ မြို့တွင် သုတေသန ပြုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
Mark Edington, Head of Grant Management at the Global Fund, praised Myanmar for its “strong capacity, good strategy and national leadership” and said Myanmar’s progress on its new grants was very positive. Maybe Mr Edington is talking about another country named Myanmar. The press release says the Global Fund is “learning from Myanmar” instead of […]
AIDS ဖြင့် ကွယ်လွန်သူ များ အောက်မေ့ဖွယ် ဒေါ်စု တက်ရောက်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, PLH, အကူအညီ, အခွင့်အရေး
“အခုလို အမေစုက အားပေးစကားတွေ၊ တိုက်တွန်းစကားတွေ လာပြောတော့ အင်မတန် အားရပါတယ်။ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ရကျိုးလည်း နပ်ပါတယ်။ အမေစု တိုက်တွန်း သလိုမျိုး ဖြစ်လာဖို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။” ဟု လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့မှ ဆုတောင်းပွဲ တက်ရောက်သူတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
This is what happens when ‘journalists’ write stories while sitting at their desks and searching on the internet: boilerplate regurgitation of others’ writing and no news. Jamie ++++++++++++++++++ HIV/AIDS an ongoing issue in Burma Casey Hynes Asian Correspondent May 24, 2013 9:20AM UTC The news that comes out of Burma generally doesn’t fall in the […]
ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်းသည် အလွန် နိမ့်ကျသည့် စိတ်ဓာတ်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, PLH, မဇ္ဈိမ, အခွင့်အရေး
အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ဥပဒေပုဒ်မများဖြစ်သည့် တရားမဝင် ဆေးထိုးအပ် ကိုင်ဆောင်မှု၊ ပြည့်တန်ဆာ ပုဒ်မများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်း ကုသမှု ခံယူရန် ပျက်ကွက်ခြင်း ပုဒ်မတို့ကိုလည်း လိုအပ်သလို ပြုပြင်ဖျက်သိမ်းမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် ကြေညာချက်တွင် ထပ်မံတောင်းဆိုထားသည်။
Evidence about evidence based policy making
What is the evidence that evidence based policy making exists? What isa‘policy’ in Myanmar? http://blogs.worldbank.org/publicsphere/what-evidence-evidence-based-policy-making-pretty-thin-actually Jamie
အခွင့်အလမ်းနှင့် လစာတိုး ရမည်ဆိုပါက လိင်လုပ်သား ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်လို
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: HIV, SW, အခွင့်အရေး, အမျိုးသမီး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိင်လုပ်သား ငါးဦးလျှင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် HIV ရောဂါကူးဆက်ခံနေရပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ART ဆေး ရယူလျက်ရှိသည့် လိင်လုပ်သားဦးရေ ၆၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟု အင်တာနက် စာမျက်နှာ အချို့၌ ဖော်ပြသည့် သတင်းများအရ သိရသည်။
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmar, Q&A1 comment | Tags: HIV, STD, ကျန်းမာရေး အသိ, လမင်းကို, အမျိုးသမီး
HIV ကူးစက်ရင် ဘာလက္ခဏာမှ သိသိသာသာ မပြပါဘူး။ ပိုးကူးစက်ခံရပြီး ၁ ပတ် ၂ ပတ်မှာတော့ တုန်ကွေးဆန်ဆန် ဖျားနာတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါယ်။ ဒါကို အတော်များများ သတိ မထားမိတတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ခုခံအားက အဲဒီ အချိန်မှာ ကောင်းနေလို့ပါ။ ခုခံအားကောင်းနေသရွေ့ ဘာလက္ခဏာမှ မပြပါဘူး။ နှစ်နဲ့ချီပြီး သာမန်လူလိုပဲ နေနိုင် ပါတယ်။
Here is another organisation working in HIV that has arrived and appears to have started at the top. Jamie ++++++++++++++++++ Thein Sein meets Clinton’s Health Access Initiative officials Eleven Myanmar Friday, 10 May 2013 23:43 Myanmar President Thein Sein yesterday received officials from Clinton Health Access Initiative (CHAI) to discuss the health sector in Nay […]
Myanmar Times article doesn't critically examine incorrect assumptions by Ministry officials
Oops. The Myanmar Times staff need even more re-education on HIV issues if they see their role to monitor accuracy and ensure accountability by Ministry officials. MoH staffer Tun Nyant Oo has made several incorrect assumptions here. Testing does NOT prevent HIV acquisition. It never has and never will. Testing after risk behaviour cannot prevent […]
HIV ဝေဒနာရှင် များကို ART ဆေး ထပ်တိုး ပေးမည်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: ART, HIV, ဆေးဝါး
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကလေးမြို့နယ် အတွင်းရှိ HIV ဝေဒနာရှင် များအတွက် ART ဆေး တိုးပေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကလေးမြို့၊ ပြည်သူ့ ဆေးရုံဝင်း အတွင်းရှိ ခုခံကျ/ကာလသား ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။